दु,खद खबर – प्रहरी हिरासतम रहेका हरी उदासी बारे यस्तो खबर आएपछी सबितालाई के भयो यस्तो ? भिडियो सहित – My Blog
No Comments on दु,खद खबर – प्रहरी हिरासतम रहेका हरी उदासी बारे यस्तो खबर आएपछी सबितालाई के भयो यस्तो ? भिडियो सहित
चलचित्र कर्मी एवं सामाजिक अभियन्ता भनिने हरि उदाशीको पारीवारिक विषय बाहिर आएपछि धेरैले उनको बारेमा विभिन्न खालका टी,काटिप्पणी गरिरहेका छन् । हुनत अहिले हरी उदासी अ,भद्र मु,द्धामा प्रहरी हिरा,सतमा नै छन । उनलाई को,रोना भएको प्रहरिले जनाएको छ तेसैले उनलाई अहिले उ,पचारको लागी आस्पतालमा राखिएको छ तर हिजो पुन्य गौतम भेट्न जादा भेट्न दिइएन भनेर पुन्यले गुना,सो पनि गरे ।
हरि उदासीको बिषयलाई लिएर अहिले विभिन्न सामाजिक व्यक्तित्त्व तथा अभियान्ताहरूले विभिन्न प,क्ष तथा विप,क्षमा आफ्नो विचार व्यक्त गरिरहेका छन् । पुन्यले भने हिन्दू नारिको महान चाड तीज उनको श्रीमती सबिताको सुन्यमा नै बित्यो सबिताले रु,दै पुन्यलाई भनेकी रहेछिन दाइ मेरो यो तीज नर,माइलो भयो, बाकी भिडियोमा हेरौ
← के आयो यस्तो रोग ? एकाएक बिरामी पर्न थाले मानिसहरु ? अस्पतालमा बिरामीको सङ्ख्या ह्वात्तै बढेपछी चिन्ता बढ्यो → ऋण लागेर दाङ देखि विदेश जान हिंडेका श्रीमान काठमाडौं आएर श्रीमतीको फेसबुकको प्रोफाइल खोलेर हेर्दा जे देखे, भैदिए भूमिगत (भिडियो)